Olan'ny sekoly tsy miankina... Raha ianao?
Jean Jacques Rakotoarison
Ny ankamaroan’ny mpampiasa ny tambajotram-pifandraisana dia mandiso sy mamotika ny teny malagasy
Jean-Jacques Rakotoarison mpampianatra mpikaroka filozofia. Mpanabe ho olom-pirenena vanona koa dia sehatra nahafantarana azy. Mpampiofana Afrikana momba ny Zon’ny Olombelona ny tenany. Ny teny malagasy antoky ny fampivelarana ny hambom-pom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana no lohahevitra zarainy amintsika.
Manabe ao anaty krizy
Sr Monic il y a 2 années
Ny 2 jona dia natokan’ny Firenena mikambana ho andro ho an’ny Ray aman-dReny. Ka na omena andro iray ho azy azy izy ireo ny Ray aman-dReny dia mitodika hatrany amin’ny zanany. Indro vavaka atolotry ny ray ho an’ny zanany. Ary ny 7 jona kosa tamin’ity taona 2020 ho an’ny reny. Dia ahoana ny fisehony ?